Yonke into omele uyazi ngayo nge-Orlistat powder for loss of fat AASraw
/Blog/Orlistat/Yonke into omele uyazi ngayo malunga ne-Orlistat powder yokulahleka kweoli
ezaposwa ngomhla 04 / 02 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Orlistat.
Yonke into malunga ne-Orlistat powder
2. Yintoni i-Orlistat powder?
3.Usebenza njani i-Orlistat powder?
4.Kubani sikhetha i-Orlistat yokuphila okunempilo?
5.Ziziphi iinzuzo ze-Orlistat powder?
I-6.Is i-Orlistat powder esebenzayo?
7. Ubunzima kangakanani ndiza kulahleka kunye ne-Orlistat powder?
8.Kufanele ndizithabathe njani i-Orlistat powder?
9.Yiyiphi imilinganiselo ye-Orlistat powder?
I-10.Iziphi iziyobisi okanye izongezelelo ezisebenzisana no-Orlistat?
11. Iimiphumo ezingezantsi ze-Orlistat powder
12.Fat ukulahlekelwa kweziyobisi I-Orlistat powder-ingcono kum?
13. I-Orlistat powder VS Sibutramine powder
14. Iphentermine powder VS i-Orlistat powder
15.Izibonelelo zokuthenga i-Orlistat powder evela kumthengisi we-AAS Orlistat umthengisi:
I.I-Orlistat iphambili ye powder Characters:
I-Orlistat powder, eyaziwa ngokuba ngu-Xenical, isilwanyana esilungiselelwe ukunyanyisa ukukhuluphala. Umsebenzi walo oyintloko ukhusela ukuxutywa kwamafutha ekudleni komntu, ngaloo ndlela unciphisa i-caloric intake, Emva koko uncede ukufikelela ekulahlekeni kweoli. I-Orlistat powder isebenza ngokuvimbela i-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathunjini, indlela yokusebenza eyahlukileyo Sibutramine powder kwaye I-Clenbuterol powder.
I-Xenical (Orlistat powder eluhlaza) yindlela yokulahleka kwesisindo esetyenziswa ngokuhlanganisana nokutya okuphantsi kweekhalori kunye novavanyo oluvunyiweyo logqirha. Kwakhona kunceda ukuqhubeka nokugcina ubunzima emva kokulahlekelwa kwesisindo. Kusetyenziswa kubantu abadala kuphela. I-Orlistat ipowder eluhlaza isetyenziswe kwizigulane ezinobunzima obunokuthi unokuba negazi eliphezulu, isifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu okanye isifo senhliziyo.
I-Orlistat powder kudidi lwezilwanyana ezibizwa ngokuthi i-lipase inhibitors. Isebenza emathunjini akho, apho ivimba khona ezinye iinqatha ozidlayo ngokuzibandakanya kunye nokuphazamiseka. Loo mafutha angagqithisiyo uyasuswa ekuhambeni kwakho kwebilini (BM).
2.Yintoni I-Orlistat powder?
Ukufunwa: Umhlophe okanye umhlophe omhlophe okanye okhanyayo obomvu i-crystalline powder
I-Orlistat powder, eyaziwa ngokuba yi-Xenical njenge-Orlistat igama lesigqabi se-powder ye-powder Orlistat, esetyenziswa unyango lokunyanya. Inemiphumo efanayo yokulahlekelwa kwintlawulo efana ne-sibutramine, i-clenbuterol, i-Orlistat powder ivimbela umzimba wakho ukuba ungayitholi ioli kunokutya okutyayo. Ngokunciphisa inani lamanqatha athatywayo, i-Orlistat powder eluhlaza ingakunceda ukuba ulahlekelwe isisindo ngokulula .. Ngenxa yokuncedisa i-Orlistat yokuncedisa i-powder kukunceda abantu banciphise ubunzima, kunokukunceda ukukhusela iimeko zonyango ezinxulumene nobunzima obukhulu kunye nokukhuluphala. Ubuthakathaka bunxulumene kakhulu nohlobo lwe-2 yesifo sikashukela, isifo senhliziyo, uxinzelelo lwegazi oluphezulu kunye ne-apnea yokulala, enokubangela iingxaki ezingaphezulu zempilo. Ukulahlekelwa ubunzima obuninzi ngenye yeengcebiso eziqhelekileyo ezivela kumayeza xa kuziwa ekuphuculeni impilo kunye nobomi obude.
I-Orlistat powder eyenziwa kwindawo yangaphakathi emathunjini (intlungu). ukulahlekelwa kweoli okanye i-Orlistat powder isebenza ngokuthintela i-enzymes (lipases) ekuphuleni amanqatha emathunjini nokuvumela ukuba idlule emzimbeni ongagqithwanga. Oku kunciphisa inani leekhalori ezixutywe ngumzimba. Kwi-dose ephakanyisiweyo ye-120 mg kathathu ngosuku, i-Orlistat powder eluhlaza iyanciphisa i-fat absorption yi-30 ipesenti. Nangona i-Orlistat powder iyinkunkuma yokulahleka kwesisindo esiphumeleleyo, akusiyo umlinganiselo wokulahleka kwesisindo okanye i-Orlistat arw powder. ... I-Orlistat powder iyasebenza ekukhuseleni ukuxutywa kwamathambo kwisondlo sakho esiya kukuncedisa ukunciphisa i-calorie yokudla. Kucetyiswa ukunciphisa iikhalori zokutya malunga ne-500 calories ngosuku.
I-Orlistat powder yiyo yeklasi yezilwanyana ezibizwa ngokuthi i-lipase inhibitors. Ikhusela amathumbu ukususela kwi-25% yeoli edlayo. Amafutha angafakiyo aphume emzimbeni wakho ngokusebenzisa ukunyakaza kwamathumbu. Olunye udatha lubonisa ukuba u-Alli unceda ukunciphisa inani leyona nto inobungozi ye-belly fat ebizwa ngokuba yioli ye-visceral, edibene kunye nohlobo lwe-2 yesifo sikashukela, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo senhliziyo kunye nesifo.
4.Kubani sikhetha i-Orlistat powder ngokuphila ngendlela enempilo?
Namhlanje, ukugqithisa kuya kuba yingxaki yesigqithiso, kwaye ukuba unomzimba ophezulu kunobungozi obuninzi bokuphucula iingxaki zempilo ezifana nohlobo lwe-2 yesifo sikashukela, ukuphakanyiswa kwe-cholesterol, ukuphakanyiswa kwengcinezelo yegazi, i-coronary heart disease, i-osteoarthritis, i-cancer ye-fatty-related and pain joint. Ukuze ndi ukulahlekelwa ngamanqatha okanye ukugcina ubuncinane, sihlala sisisebenzisa okanye sithatha ixabiso lokulahlekelwa kweziyobisi .Abantu abaninzi banokuzama ukuzisebenzisa ngaphambi kokuba, nangenempembelelo encinci. Ngoko Ukwenza utshintsho oluthile kodwa oluthile kwizinto zokutya kunye nendlela yokuphila kunokukunceda ukuba unciphise umzimba kwaye unciphise ingozi yokuphuhlisa le ngxaki zempilo. Njenge ukulahlekelwa kweziyobisi, I-Olistat isebenza ngokuthintela i-enzymes (lipases) ekuphuleni amanqatha emanzini kwaye ivumele ukuba idlule emzimbeni ongagqithwanga. Oku kuyanciphisa inani leekhalori ezixutywe ngumzimba. Yiyo uhlobo lwe-sourc kwisityalo esingokwemvelo, lunemiphumo engaphantsi kweminye imilinganiselo yabanye, i-Orlistat powder eluhlaza, kunye nokutya okunokutya, sinokuphila okunempilo. Kungenxa yoko abantu abaninzi uyayithanda kwaye uthenge i-Orlistat powder.
I-Orlistat powder idla ngokusetyenziselwa ukwenza iipilisi ze-Orlistat powder, okanye i-Orlistat i-capsule eluhlaza, ukwenza imveliso ekhethekileyo yokulahlekelwa kweoli. Izinzuzo ze-Orlistat powder zivumela umntu ukuba alahlekelwe i-20% yesisindo somzimba ngexabiso lezicubu ze-adipose. Njengophawu lokulahleka kwesisindo, i-Orlistat powder eluhlaza inenzuzo engenakuphulukiswa ngaphezu kwamanye amayeza okulahleka kokunyuka ngokwemigangatho yokufumana ubunzima obuqhubekayo emva kokuphela kokunyanga. ngenxa yokuba uyakwazi bongamile amanyathelo xa kuthelekiswa amayeza ezingavunywanga esintu, izenzo njengenyathelo lokuthintela nxamnye inzuzo ubunzima, kwakunye nemisebenzi kakuhle kwaye kakhulu kunciphisa ubunzulu kwezifo ezifana hypotension, isifo seswekile, yegazi kunye cholesterol.
Ngexesha lovavanyo lweeklinikhi I-Orlistat i-powder weight loss iipilisi, ngaphezu kwe-30,000 abantu abathathe inxaxheba kwisifundo. Ukususela ekuvunyelweni kwayo, ngaphezu kwe-13.5 abantu abayizigidi baye bathatha iPollistat powder eluhlaza kwaye balahlekelwa ubunzima obunzima. I-Orlistat powder ibhaliswe njengemithi yokulahlekelwa isisindo kumazwe e-149 ehlabathini. I-Orlistat iifowuni zefowuni eluhlaza ziquka:
I-Orlistat powder iye yafundiswa ngokubanzi kwiimvavanyo ezininzi zeeklinikhi. Kwimvavanyo yesilingo yesilingo, ukulahleka kwesisindo somzimba kunye ne-Orlistat powder xa kuthelekiswa ne-placebo kunye nokutya, bekuyi-50 yepesenti ephakamileyo. Ngoko ukuba ulahlekelwa yi-6 kg kwisidlo esiqhelekileyo, unokulahlekelwa ngu-9 kg kunye ne-Orlistat powder. Ukongezelela, kwaboniswa ukuba abo bathatha i-Orlistat powder eluhlaza babambelela ukulahleka kwesisindo ngaphezu kweqela le-placebo. Ukuze ufumane usebenze ngokugqithiseleyo kwi-Orlistat powder, enye i-capsule kufuneka ithathwe ngesondlo ngasinye esisisiseko (ubuninzi be-360mg ngosuku), ngaphambi, ngexesha, okanye ukuya kwi-120mg (i-capsule) iyure emva kokutya. Ukuba uphoswa isidlo okanye isidlo asiququli nayiphi na inqatha, akudingeki ukuba uyithathe.
7.Ubukhulu obungakanani ndiza kulahleka kunye ne-Orlistat powder?
Nangona i-Orlistat powder i ukuphulukana nokunyuka kwamayeza, akusilo ummangaliso wepill pilisi. Kubalulekile ukuba udibanise kunye nokutya okuqulethwe kwi-30 ekhulwini yeekhalori ezivela kwiinqatha, kunye nokuqhuba umzimba. Ubunzima bakho buxhomekeke ekubeni ungakanani amandla owenzayo ngokumalunga nomlinganiselo wamandla umzimba wakho owenzayo. Ukuba udla iikhalori ezimbalwa kunokutshisa, uya kuhlaziya umzimba ngenxa yokuba umzimba wakho ufanele uthabathe izithambiso zaso ukuze ufumane amandla angaphezulu. I-Orlistat powder iyasebenza ekukhuseleni ukuxutywa kwe-fat from your diet that will help you to reduce your calories. Kucetyiswa ukunciphisa iikhalori zokutya malunga ne-500 calories ngosuku. Oku kuya kubangela ukulahlekelwa kwe-1 lb ngeveki, okuyi-loss loss weight.
I-Orlistat powder ifika kwifomsule ifomu. Kuthathwa ngomlomo kathathu ngosuku, mhlawumbi ngokutya okuqulethe i-fat fat, okanye kwiyure enye emva koko. Ukuba udla isidlo esingenagwele, ugqirha wakho unokukuxelela ukuba weqa idosi yakho. Ungalokothi uthathe amayeza amaninzi kunokucetyiswa.
Kubalulekile ukulandela i-calori ephantsi, ukutya okuphantsi kweoli kunye nokuthatha le mayeza. Ukuba udla ukutya okuninzi okunamafutha, kunye nesidlo esisodwa se-fat-fat like a burgery grasy, unokuthi ube nemiphumo emibi yokutya. Khetha ukusila okumanzi okutya kunye neemveliso zobisi ezincinci. Ngokuqhelekileyo, akukho ngaphezu kwe-30% yeekhalori zakho kwisidlo ngasinye kufuneka sivela kumafutha.
Uya kufuneka kwakhona uthathe i-multivitamin yansuku zonke equkethe iivithamini A, D, E, K, kunye ne-beta carotene ngexesha eli Izakhiwo zezilwanyana ezikhupha izikhunta zenza kube nzima nakakhulu ukuba umzimba wakho uthathe amavithamini anelumncuba. Musa ukuthatha amavithamini kunye ne-Orlistat powder eluhlaza ngexesha elinye.
I-Orlistat powder yincinci yeprogram epheleleyo yonyango equka ukutya, ukuzivocavoca, nokulawula umzimba. Ukutya kwakho kwemihla ngemihla, iiprotheyini kunye ne-carbohydrate kufuneka ihlulwe ngokulinganayo kuzo zonke ukutya kwakho kwansuku zonke. Landela ukutya kwakho, amayeza kunye nokuzilolonga ngokuqhelekileyo.
Ukuba unqumla isidlo okanye uyidla isidlo esingenayo nayiphi na inqatha, weba i-Orlistat yakho powder ye-powder yesidlo.
Ugqirha wakho unokuncoma ukuba uthathe i-vitamin ne-mineral supplements ngelixa uthatha i-Orlistat powder eluhlaza. La mayeza angenza kube nzima ukuba umzimba wakho uthathe amavithamini amanqamle, anjengevithamini A, D, E, kunye neK. Yilandela imiyalelo yesigqirha sakho malunga nohlobo lwe-vitamine okanye i-mineral supplement yokusetyenziswa.
Thatha i-vitamin yakho okanye uncedise ngexesha lokulala, okanye ubuncinane iiyure ze-2 ngaphambi okanye emva kokuba uthathe i-Orlistat powder.
Gcina kwiqondo lokushisa elisekude kumanzi kunye nobushushu. Gcina ibhotile ivalwe ngokuqinile. Lahla nayiphina i powderat yangasetyenziswanga emva komhla wokuphela kwileyibhile yeyeza.
Qaphela umlinganiselo weyeza elisebenzisiweyo kwibhotile nganye entsha. I-Orlistat powder isilwanyana esingasetyenziswa kakubi njenge-loss-loss aid, kwaye kufuneka uqaphele ukuba kukho na umntu osebenzisa iyeza lakho ngendlela engafanelekanga okanye engenayo imithi.
I-dose ye-Xenical ye-prescription ephakanyisiweyo yinto enye ye-capsule (120 mg) kathathu imihla ngemihla.
I-dose ephakanyisiweyo ye-alli yi-60 mg kathathu imihla ngemihla.
I-Orlistat powder kufuneka kuthathwe iyure emva okanye ngexesha lokutya okuqulethwe nge-15 mg yeoli. Ukutya ngaphandle kwamafutha akudingi i-Orlistat powder.
Akukho nzuzo eyongezelelweyo iboniswe xa i-Orlistat powder eluhlaza ithathwe kwiidoses ezingaphezu kwe-120 mg.
Izigulana kufuneka zidle ukutya okunokutya okunonophelo, okunciphise i-calorie equlethe malunga ne-30% yeekhalori ezivela kwioli.
I-Orlistat powder ifaka iprogram yenkxaso yokulahleka kwesistim e-intanethi.
Ezinye iivithamini zokutya zibophelela kumafutha (amavithamini A, D, E kunye ne-beta- carotene). Xa i-Orlistat powder ithathwa, la mavithamini ayinakunyuswa kwaye apheliswe kwi-stool ngokwexabiso elongezelelweyo kunye namafutha. Ngoko ke, izigulane ezithatha i-Orlistat powder eluhlaza kufuneka zithathe i-multivitamin eziqulethe "ii-vithamine" ezincibilikisiwe ezinamafutha "ukuqinisekisa ukuba ixabiso elaneleyo leivithamini ziyafumaneka ukuze zithathwe. Ukuqinisekisa ukuba iivithamini kwi-multivitamines azixhamli njengamavithamini ekudleni, i-multivitamin kufuneka ithathwe ubuncinane kwiiyure ezimbini ngaphambi okanye emva kweeyure ezimbalwa emva kwe-Orlistat powder.
I-10.Iziphi iziyobisi okanye izongezo zokusebenzisana kunye ne-Orlistat powder?
Impembelelo yegazi ye-warfarin (i-Coumadin, iJantoven) ixhomekeka kwisixa sevithamini K emzimbeni, kwaye i-vitamin K yenye yeivithamini ezibopha amanqatha. Izigulane ezifumana i-warfarin eziqala i-Orlistat powder kufuneka zibe negazi lokuqhawula ngokugqithiseleyo kuba i-Orlistat powder eluhlaza ingenza amazinga e-vitamin K ayancipha. Oku kuya kwandisa imiphumo ye-warfarin kwaye ikhokelela ekuphumeni okungavamile ukusuka kwi-warfarin. Akukho ubungqina bokuba ukungabikho kwe-vitamin K kubonakala kwizigulane ezithatha i-Orlistat powder.
I-Orlistat ipowder eluhlaza inganciphisa ukutywala kunye negazi le-cyclosporine (iSandimmune) xa zombini iziyobisi zilawulwa ndawonye. Ngako oko, i-cyclosporine kufuneka ilawulwe iiyure ezimbini ngaphambi okanye emva kwe-Orlistat powder, kunye nokubeka esweni rhoqo amanqanaba e-cyclosporine kunokufuneka.
I-Hypothyroidism ibiwe xa i-Orlistat powder kunye nevothyroxine (i-Synthroid, i-Levoxyl, i-Levothroid, i-Unithroid) yadibaniswa. Izigulane zonyango kunye ne-Orlistat powder eluhlaza kunye nevothyroxine kufuneka zijongwe malunga neenguqu kwi-thyroid function. I-Orlistat powder kunye nevothyroxine kufuneka kuthathwe ubuncinane iiyure ezine.
11.Iziphumo ze-Orlistat powder
Ngenxa yokuba i-Orlistat powder isebenza ngokuthintela ukuxutywa kwamatye okutya, mhlawumbi uya kuba neenguqu ezithile kwiimpawu zenyama. Ezi ziqhelekileyo zivela kwiiveki zokuqala zonyango; nangona kunjalo, banokuqhubeka ngokusetyenziswa kwakho kwe-Orlistat powder eluhlaza.
Ezi zinguqu ziquka
imfuneko yokukhawuleza ukuya kwindlu yokuhlambela
izilwanyana ezinamafutha okanye ezinamafutha
inani lokunyuka kwamathumbu
ukungakwazi ukulawula ukunyakaza kwamathumbu
Ngenxa yobuninzi beoli, ioli ebonwe kwintlambo yentsholongwane ingacaca okanye ibe nombala ofana nolunxwemeni okanye obomvu.
Ezi zitshintsho zengxube ziyimpembelelo yendalo yokuthintela i-fat fat from absorption and indicate that Orlistat powder is working. Ngokuqhelekileyo zivela kwangoko kunyango, ingakumbi emva kokutya okuqulethe inani elincinci leenqatha kunokuba zicetyiswa. Ezi zihlandlo zihlala zisesigxina kwaye zinganciphisa okanye zinyamalale njengoko uqhubeka unyango kwaye ugcine ukutya okucetyiswayo kokutya okungenanto ngaphezu kwe-30% yeoli. Nangona kunjalo, le miphumo yecala inokwenzeka kwabanye abantu kwiinyanga ezili-6 okanye ngaphezulu.
Kwizigulane ezithobelekileyo zikhutshwe nge-Orlistat powder eluhlaza, iimiphumo ezibikwe zifana nezifana nabantu abadala.
Ukuba uxhalabele ngale nto okanye nayiphina imiphumo eyimpembelelo oyenayo ngelixa usebenzisa iPowlistat powder, xela ugqirha okanye ophmistri.
12.Ukulahlekelwa kwezilwanyana kwi-Orlistat powderNgaba ikhethekileyo kum?
I-A3: Kwimarike, kukho imveliso elahlekileyo yokulahlekelwa kwamanqatha, abanye banokukwazi ukulahleka kwesantya kodwa banemiphumo emibi, ezinye zizinto ezincinci, zilahlekelwa ngamanzi emzimbeni wakho kwaye ziza kuhlawulela. Kukho ezinye ezivela kwimithombo yemvelo, kunye akukho miphumo emibi, i-Orlistat powder nje yile mveliso yemveliso, abanye abantu bathatha i-Orlistat powder eluhlaza kunye ne-Orlistat powder, eninzi imithombo yemvelo.
I-A4: I-Orlistat powder eluhlaza ihluke kwezinye iifom, kukuhlambulukileyo kwaye kulula ukuyisebenzisa, ukuba ngaba ngabavelisi bokulahlekelwa kwemveliso enamafutha, unokongeza i powder ye-Orlistat kwikhofi, i-candy nezinye izinto, ukuba ngaba ngumsebenzisi, sinokukuthabatha nje .Abantu abaninzi bathenga i-Orlistat powder kwi-intanethi uze uyifake kwikhofi okanye uyenze ngokulandelelana emva kokutya.
I-Q5: Ndingayithenga phi ukuhlambuluka okuphezulu okanye i-Orlistat powder eluhlaza?
13.I-Orlistat powder VS Sibutramine powder
I-Orlistat powder ingaba yincinci ngaphantsi kwe-sibutramine ekunciphiseni ubunzima bomzimba. Nangona i-Orlistat powder eluhlaza kunye ne-sibutramine ngokuqinisekileyo ivelise ukulahleka kwesisindo, umphumo uyathobekile. I-Orlistat powder, okanye i-sibutramine ayikwazi ukunyusa ukunciphisa ubunzima besininzi kubantu abaninzi.
I-Orlistat powder ingaba namandla ngakumbi ekuphuculeni i-blood glucose control.
Ulwaphulo lwe-orlistat lwe-powder ludibaniswa nokunciphisa okuncinci kwixinzelelo lwegazi
Amachiza amabini ahluke iiprofayili zokunyamezela. I-Sibutramine ixhomekeke kangcono kunokuba i-Orlistat powder eluhlaza1. Nangona kunjalo, i-sibutramine iyaphikiswa kubantu abane-coronary disease, ukukhubazeka kwenhliziyo, i-arrhythmias, isifo, okanye ukulawulwa kwengcinezelo okanye ukufumana iziyobisi zengqondo.
Iziphumo eziqhelekileyo eziqhelekileyo kunye ne-Orlistat powder zinamafutha, i-flatus kunye nokuphuthuma kwe-fecal. Kwaye kunye nemiphumo ye-sibutramine yintloko, umlomo owomileyo kunye ne-anorexia. I-Sibutramine inokunyusa uxinzelelo lwegazi kunye nentliziyo.
14.Iphentermine powder VS I-Orlistat powder
I-Phentermine kunye ne-Orlistat powder zezidakamizwa ezibini ezithandwa kakhulu kwihlabathi ezisetyenziselwa ukunciphisa ubunzima obongezelelweyo kunye nokulwa nokunyanyisa. Ezi ziyobisi zingakwazi ukulwa nokukhuluphala kakuhle kakhulu, kodwa ngasinye sineempembelelo ezahlukeneyo ze-pharmacological kwiqumrhu lomguli.
I-Orlistat powder isilwanyana, esingathinti isondlo, kodwa singasetyenziselwa ixesha elide, ngokungafani nePhentermine. I-Orlistat iluhlaza iyancipha okanye ikhuphe isenzo se-enzyme esichaphazela ukuxutywa kwamathambo kwisiginci sesisu (GIT). Oku kuvumela umzimba ukuba ungathetheki malunga ne-30% yamatye adliwe ngokutya, ngendlela engatshintshiyo.
Iipilisi ze-Orlistat ze-powder zincinci zanyulwa ukuba zithathwe ngomlomo. Ukususela kwi-2007, i-low-dose ye-Orlistat powder ifumaneka kwii-pharmacy ze-EU kunye ne-USA ngaphandle kwemvume (Alli). I-Orlistat powder eluhlaza 120 mg (Xenical) itholakala kuphela ngomyalelo.
Ngokungafani nePhentermine, i-Orlistat isicatshulwa esiluhlaza kufuneka isetyenziswe ngaphambi kokutya konke ukutya. Ukuba ukutya kuqulethe inani elincinci leoli, unganqumla umthamo we-Orlistat powder. Akukhuthazwa ukuthatha iipilisi ze-3 ze-Orlistat powder 120 mg ngosuku, kuba le milinganiselo ayinyuli umphumo we-Orlistat powder drug.
I-Phentermine iyisicatshulwa esiyingozi esichukumisa ingqondo kunye nokunciphisa ukutya. I-Phentermine isetyenziselwe unyango wokunyanyisa ukususela ngo-1959. Namhlanje, yiyona mveliso yokuthengisa ngokwemfuyo e-USA. Abantu banokuthenga i-Phentermine kwii-pharmacy zase-US ngomyalelo kuphela.
Iipilitomine zincinci zepilisi zenzelwe ukusetyenziswa ngomlomo kwaye azikwazi ukusetyenziswa kwiiveki ze-12 ezingaphezulu. Izigulane kufuneka zithathe iPhentermine njengepilisi ye-1 ngosuku. Ngokuqhelekileyo, esi sixa sanele ukuba isigulane singaziva silambile ngexesha lokutya. Kucetyiswa ukuba uthathe iPhentermine ekuseni; Oku kuvumela ukunciphisa umngcipheko wempembelelo engalindelekanga.
I-Phentermine kunye ne-Orlistat nemiphumo yesiphumo
I-Phentermine kunye ne-Orlistat powder zinamapilisi amancinci amakhulu anokunceda ukuphelisa ukukhuluphala, kodwa ngexesha lokusebenzisa umgangatho wecala lingabonakala. Iprohentermine ingabangela impembelelo enkulu kwi-CNS kunye ne-cardiovascular system. Ngoko ke, iimpembelelo eziqhelekileyo eziqhelekileyo zePhentermine zi:
Dyspnea okanye ezinye iingxaki zokuphefumula;
Ukungazinzi ngokomzwelo okanye ukungaqiniseki;
Sitshintsha kwizinga lentliziyo;
Ukongezelela, iipilitomine zepilisi zincinci zingabangela ezinye iziphumo zecala le-GIT: umlomo owomileyo, ukungafihlisi okanye ukutshatyalaliswa rhoqo, ukuncwina okanye ukuhlanza.
Impembelelo ye-Pharmacological ye-Orlistat iipilisi ezinqabileyo ze-powder zincinci zenzeke kwi-GIT. Ngenxa yoko, iimpembelelo eziqhelekileyo ze-Orlistat powder zidibene neengxaki ze-GIT. Iziphumo ezinobungozi obukhulu ze-Orlistat powder eluhlaza kuxhomekeke kwisixa seoli ekudleni. Zezi:
Ukuhamba rhoqo kunye nokungahambi ngokuzibandakanya;
Ukukhutshwa kowamafutha ukusuka kwi-rectum;
I-flatulence kunye nokubetha.
Ngaphandle koko, i-Orlistat powder ingenza iziphumo zecala ze-CNS, ngokomzekelo, ukuphulwa kwemijikelezo yokulala, intloko kunye nokuphulwa kombono wendawo.
Ukufingqa konke okukhankanywe ngasentla, sinokugqiba ukuba akukho nto efana nesilungiso esipheleleyo sokunyanya ukukhuluphala. Zonke izidakamizwa zinama-pluses kunye ne-minuses zayo. Ukufumaneka kwamachiza amaninzi ekunyanyeni ukunyamezela kukuvumela ukuba ukhethe uhlobo oluthile lweziguli ngamnye.
15.Izinzuzo uthenge i-Orlistat powder powder kusuka:
Ingaba i-Synephrine powder iyasiza ukunciphisa umzimba?	Thenga i-Bupropion HCL powder: isebenzise, ​​umyinge, umphumo